Xukuumadda oo billowday fulinta amarkii R/W Kheyre ee doorashada dalka – Soomaali 24 Media Network
Xukuumadda oo billowday fulinta amarkii R/W Kheyre ee doorashada dalka
Posted on June 1, 2020 Leave a Comment on Xukuumadda oo billowday fulinta amarkii R/W Kheyre ee doorashada dalka
Xukuumadda Soomaaliya ayaa war kasoo saartay shirka guddi hoosaadka Tubta Siyaasadda loo dhanyahay ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho, kaas oo diiradda lagu saaray sidii fulin lahaa amarkii Ra’iisul Wasaaraha ee ahaa in xukuumaddu ay bilaabeyso hirgalinta doorashada dalka, taas oo ku dhacda waqtigeeda.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa furay shirka guddi hoosaadka Tubta Siyaasadda loo dhanyahay, waxaana guddoomiyay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibrahim ‘Xaliimo Yareey’ oo ka qeyb gashay shirkaas ayaa sheegtay in guddigeedu diyaariyey tallaabooyinka farsamo ee laga sugayay si loo hirgeliyo doorasahada dalka la filayo inay ka bilaabato dabayaaqada sanadkan.
Kulanka ayaa looga dooday baahida deg degga ah ee loo qabo wada tashi loo dhanyahay oo ay yeeshaan dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada, si loo hirgeliyo doorasho loo dhan yahay oo xilligeeda ku qabsoonta.
Wasaarradaha amniga, maaliyadda iyo arrimaha gudaha ayaa iyaguna soo bandhigay qorshaha uga aaddan doorshooyinka dalka.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shirkii golaha wasiirrada Khamiistii lasoo dhaafay ka shaaciyay in shaqada ugu muhiimsan ee dowladda hor taalla xilligan ay tahay hirgelinta doorashada dalka oo waqtigeeda ku dhacda.
Xisbi siyaasadeed ay leeyihiin xubnaha xukuumadda Soomaaliya, ayaa maanta si rasmi ah looga diiwaan-geliyey xarunta guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka, siday ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ay noo sheegeen.
Xisbigan ayaa la siiyey magaca Nabad iyo Nolol, oo ah kan ay ku caan baxday xukuumadda markii uu talada qabtay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana guddoomiye ku-meel gaar ah looga dhigay ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, sida aan xogta ku helnay.
← Wasaaradda caafimaadka oo soo bandhigtay kiisas cusub oo COVID-19 ah
Dowladda Soomaaliya oo shatigii duullimaadka dalka kala noqotay shirkado Kenyaan ah →